Forums | MyanmarCarsDB - No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar
Used Cars (1006)	Sedan (285)
ဆိုက်Adminမှ ကြေငြာချက်များ၊ အသိပေးနှိုးဆော်စရာရှိသည်များနဲ့ အခြားသက်ဆိုင်ရာသတင်းများကို ဒီနေရာမှာတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာက ဖိုရမ်လူသစ်တွေ အချင်းချင်းမိတ်ဆက်တဲ့နေရာပါ။ ကိုယ့်အကြောင်းကို အကျဉ်းချုံးရှင်းပြပေးနိုင်ပြီး ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ၀ါသနာ၊ ကျွမ်းကျင်မှုအပိုင်းစရှိသဖြင့် ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
General Car Talk & News
ဒီမှာတော့ ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထွေထွေသတင်းများ ကိုဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့ ကားပြပွဲအကြောင်း၊ အ၀ယ်လိုက်နေတဲ့ ကားများအကြောင်း၊ ခဏခဏကြုံတွေ့ရတဲ့ မော်တော်ကားဒုက္ခများ အစရှိသဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားရာကို ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာကတော့ လတ်တလော ရေပန်းစားနေတဲ့ ကားပါမစ်များနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာများ၊ Import လုပ်ပုံလုပ်ထုံးများ၊ ကုန်ကျစရိတ်များ၊ CIF ဆိုတာဘာလဲ၊ အခွန်တွေက အသေးစိတ်ဘာတွေလဲဆိုတဲ့ ကားသွင်းတဲ့ကိစ္စအဖုံဖုံကို ဆွေးနွေးဖလှယ်နိုင်ကြပါတယ်။
ဟောဒီနေရာလေးမှာတော့ ကားဝယ်ပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်များ၊ ခံစားချက်များ၊ အခြားပညာပေးဆိုင်ရာဆောင်းပါးများ၊ ကားဝေဖန်ရေးစာစုများစသည့် အကြောင်းအရာအစုံအလင်ကို ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကားအတွင်းခန်းအပြင်ခန်းအလှဆင်ရတာ ခုံမင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံး အလှဆင်မှုဆိုင်ရာ နည်းနာနိဿယများ Tips & Tricks များကို ဝေငှနိုင်ပါတယ်။
အခုကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပြိုင်ကားတွေ အ၀ယ်များနေသလို မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပဖို့လဲစီစဉ်နေကြပြီမို့ ပြိုင်ကားဝါသနာရှင်များအနေဖြင့် ဒီနေရာလေးမှာ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ကြပါတယ်။ ကားပြိုင်ပွဲများရှိရင်လဲ အချင်းချင်းဖိတ်ခေါ်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာက ကားအမျိုးအစားအလိုက် Fan Clubs တွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲပေါင်းထားပေးတာပါ။ တိုယိုတာကြိုက်သူများ၊ ဟွန်ဒါကြိုက်သူများစသဖြင့် သင်နှစ်သက်ရာကားအမျိုးအစားအလိုက် Fan Club လေးတွေကို ၀င်ရောက်ပြီး ၀ါသနာတူ အကြိုက်တူ မိတ်ဆွေများနဲ့ ဆွေးနွေးမိတ်ဖွဲ့နိုင်ပါတယ်။
ကားဝယ်ယူလိုသူများအတွက် မိမိတို့ အလိုရှိသော ကားများကို MyanmarCarsDB တွင်မတွေ့ ရှိပါက ဤနေရာတွင် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
1300 cc car Tyres	wanna buy honda accord	AD van 2007 model and Honda fit ကား ၀ယ်လိုသည်	Facts to be careful before purchasingacar	price of 1300cc car	ယနေ့ လူကြည့်အများဆုံး ကားများNissan (75 views)Honda Fit L Package (74 views)TOYOTA CROWN ROYAL SALOON - G (73 views)CALDINA ROBOT 2002 ZT GRADE with front &back camera (59 views)Toyota Belta 1300cc Price135Lakhs ကားသန်. (54 views)Nissan ADVAN 2008 VE (53 views)2007 TOYOTA ISIS 2.0 PLATANA (7 seater) (53 views)Toyota Mark2(48 views)Toyota Probox Comfort Pck အပြီးစီး ၁၁၈သိန်း(အလျော့အတင်း၇ှိ) (45 views)Mazda Rx8 (smart key, push start) (45 views) © 2013 MyanmarCarsDB – No 1 Car Marketplace/Classifieds Website in Myanmar. All Rights Reserved.